B52 jikọọ nsogbu
Jikọtara: 19 Sept 2018, 09:44
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by agba » 19 Sept 2018, 23:50
Ndewo .Marcus ebe a.Just na-eche ma mmadu o bula enweela nsogbu na ngwugwu Boeing B-52H FSX & P3D.Ọ gosipụtara ebe a ka ọ dakọtara prepar3d v4 mana na nke m wụnyechara ya egosighi eserese ọ bụla na faịlụ nhọrọ wee daa ma m nwara ịkwanye ya.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 21 Sept 2018, 19:07
Ihe ị kwuru juru gị anya, enyochala m faịlụ a ma jide n'aka na ọ dakọtara na ya Prepar3D v4, ot 'onye edemede nke ihe omuma a (David Robles) na-eme ka emelitere ya FSX NATIVE na ngwanrọ MCX mana ọ BEFGHEF NSỌ. Thedị ndị ahụ sitere na FS2004. Yabụ, ugbu a enwere m ike ikwupụta na ọ dakọtara na FSX na P3D rue VERSION 3 (obughi 4). Emelitela peeji ahụ iji gosipụta eziokwu.
Daalụ maka ịbịara m mbipụta a.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by agba » 22 Sept 2018, 06:06
Cheers Erik.Yeah.Can siri ike mgbe ụfọdụ ruo mgbe ị nụrụ site n'aka onye na - ahụghị na ọ naghị arụ ọrụ. M ga - agwa gị mgbe m ga - ahụ ndị ọzọ.